Ekaterina Pavlovna Peshkova-Volzhina - एउटा अचम्मको महिला जसको नाम Maksima Gorkogo जीवन देखि जीवनी वा कथाहरू भन्नुभयो अक्सर उल्लेख गरिएको छ। यस मामला मा, धेरै मानिसहरू यो 1918 देखि 1937 को सोभियत रूस र सोभियत संघ को जेलमा कैदी गर्न सहयोग को प्रावधान मा लगे थियो जो राजनीतिक रातो क्रस, जानिन्छ संगठन को संस्थापक मध्ये एक थियो भनेर थाह छ।
Peshkova Ekaterina Pavlovna: जीवनी
प्रारम्भिक 19 औं सताब्दी मा महान परिवार को बच्चाहरु, नियम, आफ्नो मूल को कैदी थिए। तथापि, पछि यो वर्ग थुप्रै सदस्यहरूले गरिब भएका छन्, र आफ्नो सन्तानको बीचमा वर्ग वा काम को बच्चाहरु भन्दा कुनै राम्रो थियो अवस्था, परिवर्तन छ शताब्दीको अन्त गरेर बल्लतल्ल बनाउन समाप्त पूरा।
र स्वामित्व घरबारविहीन परिवारलाई Katya Volzhina (विवाह Peshkova Ekaterina Pavlovna पछि) यी महान बच्चाहरु बीचमा। त्यो सुमी को शहर मा एक महान परिवारमा जन्म भएको थियो। केही अज्ञात कारणले, विभिन्न वर्ष मा3कागजातहरू मा जन्म मिति संकेत गर्छ। तथापि, आधिकारिक यो Katya Volzhina जुलाई 1876 मा जन्म भएको थियो भनेर स्वीकार गरे। केही समय पछि, उनको परिवार समारा गर्न, एक पिता रूपमा, लेनदारों ठग्न सारियो, आफ्ना सबै भाग्य गुमाए। त्यहाँ पनि परिवार भाडामा भुक्तानी गर्न बल्लतल्ल पर्याप्त छ जो आमाको तलब, एक रहिरहेको घरमा बस्न गए। 4th ग्रेड व्याकरण देखि पहिले नै Katya किनभने मेरो बुबा गम्भीर बिरामी थिए, पाठ दिन थाले। साथै, त्यो भोक लागि सूप भान्सा भाग्यो गर्ने उनको आमा, मदत गरे।
1895 मा, क्याथरीन एक पदक संग उच्च विद्यालय स्नातक र तुरुन्त काम प्राप्त गर्ने निर्णय गरे। त्यो धेरै चाँडै यसलाई गरे, त्यसैले एक महिना को केटी को प्रमाणपत्र को रसिद पछि युगल पछि एक कर्मचारी "समारा अखबार" र प्रदर्शन गर्ने corrector को कर्तव्य भएको थियो।
जवान गोर्की संग Familiarity
संस्करण "समारा अखबार" मा क्याथरीन Volzhina समय समयमा यो संस्करण प्रकाशित गर्ने Alekseem Peshkovym, भेटे। जवान मानिसहरू बीच एक whirlwind रोमान्स गर्न थाले। यो केटी आमाबाबुले आफ्नो छोरी को विकल्प संग राख्न एक वर्ष लगभग लिए। तिनीहरूले पनि लेखक-विद्रोही लागि उनको प्रेम लामो बिछोड धान्न छैन भनेर आशा, Kronstadt उनको पठाए। तर भाग्य अन्यथा निर्णय थियो: पावलले Volzhin को यात्रा बाट बालिका को फिर्ती सम्म बाँच्न छैन, र विधवा उनको छोरी हस्तक्षेप गरेनन्। 1896 को गर्मी मा उनको आशीर्वाद संग, Ekaterina र मैक्सिम विवाहित थिए। कि पछि क्याथरीन Volzhina Peshkov उनको नाम परिवर्तन र जीवनको अन्त अघि यसलाई परिवर्तन भएन।
1897 मा दम्पतीले आफ्ना छोरा अधिकतम र त्यसपछि छोरी Katya, त्यो बल्लतल्ल5वर्ष हुँदा मेनिनजाइटिस को मरेका थिए।
जवान परिवार Nizhny Novgorod सारियो पछि यो दुःखी घटना छिट्टै भयो। केटी मृत्यु spouses बीच quenching को कारण थियो, र 1903 को अन्त्यमा, Peshkov गोर्की अर्को महिला थियो कि थप, आपसी सहमति गरेर parted। तथापि, तिनीहरूले आफ्नो जीवन धेरै न्यानो सम्बन्ध भर खुलिरहेको। त्यहाँ एक औपचारिक सम्बन्धविच्छेद Aleksey Maksimovich र Yekaterina Pavlovna Peshkova कहिल्यै formalized प्रमाण हो। यो दाबी को समर्थन मा गोर्की अब हुनत छैन पटक महिला संग जान, कुनै पनि दर्ता विवाह सामेल भन्ने तथ्यलाई छ।
1907 मा, साथ 10 वर्षीया छोरा मैक्सिम Peshkov Ekaterina Pavlovna विदेश गए। त्यहाँ तिनीहरूले पेरिस मुख्य रूप बस्थे। चाँडै, गोर्की को पूर्व पत्नी आफ्नो शिक्षा जारी गर्ने निर्णय र Sorbonne विश्वविद्यालयमा सामाजिक विज्ञान मा फ्रान्सेली भाषा पाठ्यक्रम र लेक्चर धाउन थाले। यस समानान्तर, यो वी एन Figner द्वारा आयोजित सर्कल सहायताको जेल र निर्वासनमा को काम, आकर्षित। विदेश Peshkov Ekaterina Pavlovna (माथि आफ्नो युवावस्थामा फोटो हेर्नुहोस्।) को समाजवादी-क्रांतिकारियों सामेल र साथै, आप्रवासी कार्यालयमा काम सामाग्री सहायता रूसी राजनीतिक emigrants को संगठन को लागि किस्मत।
पहिलो विश्व युद्ध को समयमा
सन् 1914 मा, Peshkov छोराछोरीको समिति "युद्ध को सिकार सहायता" र स्वयंसेवकहरु एउटा समूह, हेर्न नाबालिग अगाडि लाइन छोडेर लागि लाग्यौं थियो। हजुरबुबा ए डी Saharova - यो काममा, त्यो आई एन Saharov मदत गरे।
घरमा त्यो ठूलो लाभ ल्याउन सक्छ भन्ने निर्णय, Peshkova Ekaterina Pavlovna, सँगै आफ्नो छोरा रूस फर्के। आफ्नो बाटो किनभने संसारमा, इटाली देखि तिनीहरूले Constantinople गर्न जहाज जान थियो, जबकि सिर्जना राजनीतिक अवस्थाको रूपमा, साहसिक भरिएको थियो र त्यहाँबाट ओडेसा प्राप्त गर्न।
लाल क्रस को गतिविधिहरु
उनको जीवनको एक ठूलो भाग एउटा कारण वा अर्को लागि, मानिसहरूलाई समर्पित थियो पछि, Ekaterinu Peshkovu थाह थियो philanthropic प्रकृति को एक मानिस उनको भनिन्छ गर्नेहरूलाई तिनीहरू मदत गर्न सक्छ जहाँ एक अवस्थामा आफूलाई फेला। पनि विदेश को बसाइ बेला महिला लाल क्रस सहयोग र कैदी लागि र घर फिर्ता पछि खोजी गर्न जारी राख्न थाले।
को Bolshevik आतंक समयमा Peshkov Ekaterina Pavlovna लाल क्रस लागि काम जारी राखे। Bolshevik संगठन आवश्यक थिएन, तर यो Korolenko, Kropotkin र Veresaev Figner जस्ता सम्मान तथ्याङ्कले समावेश किनभने जवान गणतन्त्र को सरकार, यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं। एकै समयमा त्यहाँ राजनीतिक कैदी को एक नयाँ लहर छ, अब (ख) RSDLP को नीति सँग सहमत।
को KGB र NKVD संग "सह-अपरेसन"
लाल क्रस को मास्को समिति जेलमा Peshkova निर्देशन भ्रमण गर्न। प्रतिरोध यो छैन र उनको औंलाहरु मार्फत उनको काम देख्यो Cheka। यो गोर्की आफ्नो यात्राको एक देखि पूर्व-पत्नी विदेश एफ Dzerzhinsky उपहार mouthpiece मा ल्याएको प्रमाण पनि संरक्षित। यी सम्बन्ध को कारण यसको समर्थन प्राप्त गर्न हरेक तरिकामा गोर्की लेनिन दुलार इच्छा छ कि विश्वास छ।
तैपनि, Ekaterinu Pavlovnu गर्न 1919 मा छानबिन फाइल खोलिएको थियो। त्यो पनि सम्बन्धित आरोप थियो समाजवादी-क्रान्तिकारी पार्टी। जांच समयमा, घर मा महिला खोजी थियो, तर त्यो पक्राउ गरिएको थिएन, र 1922 मा मामला बन्द भएको थियो।
1922 मा, Ekaterina Peshkova (गोर्की पत्नी) नयाँ संगठन सिर्जना गरेको छ। यसको कर्मचारीहरु जीवन सजिलो सिकार भएका हजारौं बनाउन जेल Dungeons मा प्रयास गरेका छन् किनभने मानिसहरूले यसलाई Pompolitom भनिन्छ राजनैतिक दमन। अक्सर, एक महिला पोलिश रातो क्रस गरेर सुरु कैदी को खोजहरू, समयमा कैदी भ्रमण गर्नुभएको थियो। साथै, Ekaterina Peshkova (गोर्की को पत्नी) बारम्बार विदेश को भोक वोल्गा लागि रकम जुटाउने यात्रा। र प्यालेस्टाइन गर्न ू गर्न त्यो मदत धेरै जो यहूदीहरूका मुक्तिको यसको अमूल्य योगदान, सीयनीज्म आरोप।
1938 मा Pompolit को NKVD को आदेश मा बन्द भएको थियो हुनत, Ekaterina Pavlovna उनको गरिएका सबै मदत गर्न छोडेनन्। 1941 मा यो युद्ध समाप्त सम्म त्यो बस्ने ताशकहरुट, गर्न खाली थियो।
आफ्नो जीवनको अन्तिम वर्ष मा
Peshkova Ekaterina Pavlovna, जीवनी तपाईं धेरै वर्ष को लागि जानिन्छ जो मा विश्व साहित्य को अभिलेखालयबाट ए गोर्की संस्थान एक सल्लाहकार रूपमा काम गरे। उहाँले 1965 मा एक लामो रोग पछि मृत्यु भयो। त्यो अर्को उहाँको छोरा र छोरी गर्न, Novodevichy चिहान मा गाडे।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, जेठो Peshkov - मैक्सिम - 1897 मा जन्म भएको थियो। आफ्नो बाल्यकाल को सबै भन्दा उहाँले विदेश आफ्नो आमा संग बिताए। 1917 मा आफ्नो फिर्ती मा उहाँले RSDLP साथ दिए। लगभग तुरुन्त कि पछि म कहाँ उहाँले मुद्दाहरू राजधानी को खाद्य आपूर्ति संग संलग्न थियो KGB, काम सुरु भयो। 1922 मा उहाँले इटाली लागि बायाँ। उहाँले बर्लिन बस्थे। अक्सर उहाँले गोर्की भेटे। 1932 मा, सँगै आफ्नो बाबु र आफ्नो पत्नी संग सोभियत संघ फर्के। यो अक्सर नै निमन्त्रणा र NKVD Yagoda को Commissar मिलाप छ ज्ञात छ। एक दिन, अर्को भोजमा आफ्नो फिर्ती मा, तीतो चिसो मा, त्यो यार्ड, धेरै चिसो बसेर र निमोनिया को मृत्यु भएको थियो।
अब तपाईं Peshkov Ekaterina Pavlovna थियो थाहा छ। आफूलाई कठिन जीवन परिस्थितिमा फेला मानिसहरूलाई मदत गर्न - लाल क्रस र Pompolite यसको गतिविधिहरु गर्ने साक्षी ती को सम्झनाहरु दान गर्न आफ्नो जीवन समर्पित छ जो एक व्यक्तिको रूपमा उनको चिनारी।
Zemstvo: एक संक्षिप्त विवरण
RSFSR - यो के हो? RSFSR: ट्रान्सक्रिप्ट, शिक्षा, संरचना र क्षेत्र
समस्याहरूको को समय। मुख्य बारेमा छोटकरीमा
संसारमा कला को masterpieces मा सेन्ट सेबस्टियन
विवरण, उपकरण प्रकार, र समीक्षा: ताप प्रणाली लागि विस्तार ट्यांक
इस्लाम पवित्र युद्ध
बर्लिन पर्यटक के हेर्न?
न्यानो बेड तपाईं एक प्रतिकूल जलवायु मा एक प्रारम्भिक बाली प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ